Ilungelo elilodwa lomenzi liyakujika iApple Watch ibe sisilumkiso sezongxamiseko | IPhone iindaba
Ilungelo elilodwa lomenzi liya kuyiguqula iApple Watch ukuba ibe sisilumkiso esingxamisekileyo
Xa iApple yazisa iApple Watch, ikwenze oko njengesixhobo esinokusinceda sihlale sisempilweni. Enye yeendlela zokufezekisa oku kungakukusikhuthaza ukuba senze imithambo yomzimba. Bakwazise ne-HealthKit, ezizizixhobo ezinakho ukuphanda ngezifo ezithile. Namhlanje isicelo se patent ucebisa ukuba uTim Cook kunye nesicwangciso senkampani vula iApple Watch ibe sisixhobo esipheleleyo sonyango ukuba ingahlala ihlalutya izinto zethu ezibalulekileyo kwaye ithumele isaziso sokulumkisa ukuba sifuna uncedo olukhawulezileyo.
Le patent intsha ibizwa «Nceda ukufunyanwa komcimbi kunye nezilumkiso»Kwaye ichaza inkqubo yehardware ekwaziyo Hlalutya okusingqongileyo bakujikeleze ngenxa yento abayibize ngokuba "yiminyhadala yoncedo," abayichaze njengaso nasiphi na isiganeko esifuna ubuqu, amapolisa, uhlangulo lomlilo, okanye olunye uncedo olungxamisekileyo lobuchwephesha. Umzekelo, isixhobo sinokucwangciswa ukuba siqwalasele intliziyo yomsebenzisi kwii-arrhythmias kwaye, xa sifunyenwe, thumela isilumkiso kwilungu losapho okanye kwimeko ezingxamisekileyo.
I-Apple Watch yekamva inokubusindisa ubomi
Kwisicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza I-Apple Watch ayikhankanywanga Ngokukodwa, kodwa kuphela kwesixhobo seApple sangoku esinokuhlangabezana nazo zonke iinjongo. Zonke ezinye izixhobo kwibhloko azihlangabezani neemfuno ezichazwe kule patent. Sinokucinga ukuba banokwenza ezinye izacholo ezilula, kodwa kwimeko enjalo kuya kufuneka benze enye yonyango olungxamisekileyo, kuba, ukuba injongo ikukusungula isixhobo esinemisebenzi embalwa ukuyenza ibe noqoqosho ngakumbi, esi sixhobo sitsha kufuneka kube lula. Ukongeza, njengenkampani efuna inzuzo, ingangumbono olungileyo ukuba iApple ibandakanye le misebenzi iwotshi eneemodeli ezinokufikeleleka ngaphezulu kwe-400 euros. Ukuba kufuneka izixhobo ezongezelelekileyo, indleko zayo ziya kongezwa kwi-Apple Watch, ebonakala isengqiqweni ngakumbi kwinkampani efana neApple.
Xa isixhobo ekuthethwa ngaso sibhaqa enye yezi ziganeko zononophelo, inkqubo iyathumela izilumkiso kuluhlu oluchazwe kwangaphambili lwabamkeliOku kubizwa ngokuba "luluhlu lokuzimasa" okanye "isangqa sokhathalelo." Olu luhlu luya kusekwa ngumsebenzisi kwaye luya kuba neenkcukacha zonxibelelwano zamalungu osapho, oogqirha kunye neenkonzo zikaxakeka ngokubanzi.
Ukuze le nkqubo isebenze, ifuna ukulungiswa ukunqanda ii-alamu ezingezizo. Ilungelo elilodwa lomenzi libandakanya indlela eqinisa izaziso ngokubhekisele kubukrakra babo ngaphambi kokuzithumela kubamkeli boludwe lwengqwalaselo kwaye bohlulwahlulwe baba lunegunya elahlukileyo. Umzekelo, iqabane okanye ilungu losapho linokuba kwinqanaba lokuqala kuluhlu lokuzimasa kwaye lifumane isaziso sokuqala. Kwezinye iimeko, iinkonzo zikaxakeka zikwelona nqanaba liphezulu kwaye zaziswa kuphela ukuba imeko iyenyuka okanye bonke abafumana kuluhlu bazisiwe kwaye abaphendulanga kwifowuni.
Njengoko sihlala sisitsho, ukuba ilungelo lobunikazi selifakiwe oko akuthethi ukuba siza kuyibona kwimveliso yexesha elizayo yenkampani eyivezileyo, kodwa iyasinceda ukuba sazi ukuba basebenza ngantoni. Ukuthatha ingqalelo ukuba impilo yenye intengiso ebonakala ngathi ibalulekile, singacinga ukuba kungekudala okanye kamva siza kubona into efanayo naleyo ichazwe kule patent Yam isuka kwiApple. Ngokuqinisekileyo, kuya kufuneka silinde ixesha elide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ilungelo elilodwa lomenzi liya kuyiguqula iApple Watch ukuba ibe sisilumkiso esingxamisekileyo
Kutheni le nto ibhetri ye-iPhone yenzelwe ukugcina usuku?
I-Periscope iphumelela kwiVenkile ye App yaseSpain enkosi kuPiqué